Waaliga Jubooyinka Oo Ka Warbixiyay Xaaladda Guud ee Wilaayadaas.
Tuesday March 31, 2015 - 21:57:20 in Wararka by Super Admin
Sheeq cabdi raxmaan Xudeyfa Waaliga Wilaayada Jubooyinka oo wareysi Siiyay idaacadda Islaamiga Andalus ayaa ka hadlay xaaladda dacwada ee ka socota degmooyinka ay ka koobantahay wilaayada iyo qaabka ay u socdaan.
Waxa uu sheegay in cidda sida weyn iminka kaga faa'ideysaneysa ay tahay odayaasha dhaqanka oo markan la barayo diintooda islaamka dhameystayna Kutub badan.
Mar wax laga weydiiyay Sheeq Cabdi Raxmaan Xudeyfa xaaladda ciidanka kenya ee ku sugan Jubooyinka ayuu Yiri,"Muddo dhowr sano ah oo ay ku sugnaayeen degmooyin ka tirsan Jubooyinka waxaan ku qasabnay inay ku ekaadaan xeryahooda oo wali aysan ku nabad galeyn weerarkana habeen iyo maalin uu ku socdo".
Wasiir ay isku dhowaayeen Xasan Cali Kheyre oo iscasilay diniina kasoo saaray xaaladda 'Galmudug'.
Sheekh Yuusuf Kaba Kutukade oo si qota dheer uga hadlay xaaladda gobolka Sh/dhexe [Wareysi].
Dhageyso: Xarakada Al Shabaab oo Umadda Soomaaliyeed Ugu Hambalyaysay Munaasabadda Ciidda Kana Hadashay Xaaladda guud ee dalka.